खराब कर्जाको धितो लिलामी नहुँदा बैंक र वित्तिय संस्थाका सीइओसाबहरु तनाबमाः कोरोना भाइरसका कारण जग्गा किन्नेहरु भेटिन छाडे ? - Aathikbazarnews.com खराब कर्जाको धितो लिलामी नहुँदा बैंक र वित्तिय संस्थाका सीइओसाबहरु तनाबमाः कोरोना भाइरसका कारण जग्गा किन्नेहरु भेटिन छाडे ? -
सनराइजमा खाता खोल्न अझै सजिलो, अनलाइनबाटै तुरुन्तै सनराइज स्मार्ट बचत खाता खोल्न सकिने
‘कृषिका समस्या यथावत् छन्, कोभिडको असरबाट बचाउन विशेष प्याकेज चाहिन्छ’
शेयर बजारमा एकै दिन दुई नयाँ रेकर्ड, झण्डै १९०० विन्दु नजिक
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
महासंघमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः बिनोद चौधरी र प्रचण्डसँग असन्तुष्टी
खराब कर्जाको धितो लिलामी नहुँदा बैंक र वित्तिय संस्थाका सीइओसाबहरु तनाबमाः कोरोना भाइरसका कारण जग्गा किन्नेहरु भेटिन छाडे ?
विश्वव्यापीरुपमा अदृश्य शक्तिबाट अदृश्यरुपमा आएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले अहिले हाम्रो देशमा नेपाल कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट १ लाख भन्दा बढि बिरामी परेका छन् भने ७ सय भन्दा बढिको दुखद निधन भएको छ । यस्तो विषम र विपतका बेला पनि जीवनलाई जोखिममा राखी सेवा दिइरहेका बंैक र वित्तिय संस्था भित्र पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेको भेटिएको छ ।
भनिन्छ ३ हजार भन्दा बढि बैंकरहरुमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ ।
नेपालकै ठुलो नबिल बैंकका सीइओ अनिल केशरी शाहलाई समेत कोरोना पुष्टी भएको भेटिएको छ । अर्को ठुलो विकास बैंक महालक्ष्मी विकास बैंकका सीइओ सागर शर्मालाई पनि कोरोना पुष्टी भएको छ । बैंक र वित्तिय क्षेत्रका उच्च कर्मचारीदेखि गार्ड सम्मलाई कोरोनाले घेरेको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
यस्तो अप्ठ्यारो र कठिन अवस्थामा पनि कर्जा दिने डिपोजिट लिने देखि खराब कर्जाका धितो लिलामी गर्ने काममा बैंक र वित्तिय संस्था लागि परेको देखिन्छ । नेपालका २७ वाणिज्य बैंक र दर्जनौ विकास बैंकहरुले दिनै पिच्छै खराब कर्जँका ऋणीहरुको तीन पुस्ते धितो लिलामीका सूचना प्रकाशन गरेको भेटिएको छ ।
तर, कोरोना कहरका कारण बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले लिलामी गरेका सयौं घर जग्गा किन्ने व्यक्ति भेटिएका छैनन् भन्दा पत्याउन गाह्राँे होला तर, यो पनि सत्य हो ।
कोरोना कहरका कारण व्यापार र व्यवसाय ठप्प छ । आम्दानी छैन हुने खानेको चुलो बलेको छ । तर, हुँदा खानेहरुको चुलो अझै बलेको छैन ।
अधिकाशं बैंकहरुले कोरोना कहरबीच नै ऋणीहरुको ऋण असुली गर्न घर जग्गा धितो लिलामीका सूचना प्रकाशन गर्दैछन् । तर, कोरोना भाइरसको असरका कारण घरजग्गा व्यवसाय पनि ठप्प छ । बैंकहरुको धितो लिलामीका घर जग्गा विक्री हुन छाडेका छन् ।
पछिल्लो समय विभिन्न पत्र पत्रिकामा देखिने प्रायः सुचनाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई ताकेता गर्दै ऋण तिर्ने भाका दिएका सुचना हुन् । साथै यी सुचनाहरुमा कतिपय सुचना गैर बैंकिङ सम्पत्ति अर्थात् ऋण दिएको समयावाधि सकिएछि लिलामी गरिएका धितो बिक्री हुन्छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले कर्जा डिफल्ट भएको न्यूनतम १ वर्षदेखि २÷३ वर्षमा धितो लिलामी गरी त्यसको गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्दछ । विगत लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा पछि भने प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता ऋण असुलीका प्रक्रिया तीब्र पारेका छन् । साथै यसबीच धेरै ऋणीका धितो लिलामी समेत गरी बैंक वित्तीय सस्थाले गोप्य शिल्बन्दी बोलप्रत्र आह्वन गरेको देखिन्छ ।
बैंकहरुले ऋण असुलीको प्रक्रिया तीब्र पारेपनि लिलामी गरिएको धितो बिक्री गरी ऋण असुल गर्न अहिले बैंकहरुलाई दबाब परेको देखिन्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण घर जग्गाको मूल्य घटेको समयमा बैंकहरुले लिलामी गरको धितोको मुल्यांकन अनुसारको मुल्यमा बिक्री नभएको हुँदा पटक पटक बोलपत्र सुचना प्रकाशित भएको भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिफल्ट भएका कर्जाको वर्गिकरण गरी सोही अनुसार प्रोभिजन गर्नु पर्ने बाध्यताकै कारण धितो लिलामीमा राख्ने प्रचलन देखिन्छ । ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न भाखा नाघेका ३ महिनापछिसम्म सुष्म निगरानी (वाच लिस्ट) सुचीमा राखी त्यसमा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस्तै, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म साँवा र ब्याज तिर्न भाखा नाघेका कर्जालाई कमसल वर्गमा राखी त्यसमा २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ । साथै, ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखी ५० ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ ।
एक बर्षभन्दा बढी अवधिमा साँवा ब्याज नउठेमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जाको वर्गमा राखी कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको देखिन्छ ।
खराब कर्जामा वर्गिकरण भएको कर्जालाई बैंकले ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने गरी ऋण तिर्न आउने सुचना प्रकाशित गर्न पाउँछन् । सो भन्दा अगावै पनि बैंकहरुले ऋणीलाई आन्तरिक रुपमा नै ऋण तिर्न आउने ताकेताको पत्र पठाउने गर्दछ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गरि धितो लिलामीका सूचना दिन दुई गुना रात चौगुना बैंकहरुले प्रकशन गरेपनि घर जग्गा किन्ने ग्राहक नपाएपछि बैंकहरुका सीइओसावहरु तनावमा परेको छन् । भन्दा फरक पर्दैन । ऋणीको धितो विक्री नभए कर्जा प्रोभिजन हुन्छ र बैंकहरुको नाफा मात्रै घट्दैन खराब कर्जा बढ्ने र बैंकका सूचकहरु विग्रीन गर्दछन् । यसकारण बैंकहरु आत्तिएको देखिन्छ । सचेत भया ।
तस्करीको सुन दुबईका कम्पनीबाट नेपाल भित्रियो, बैंकहरुको शंकास्पद कारोबार
सिभिल बैंकको दशौँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमहरु गरी मनाईयो
बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको लाभाशं र बोनस शेयर घोषणा गर्ने क्रम संगै शेयर बजारमा तहल्काः नयाँ अर्थमन्त्री पौड्याल शेयर बजार प्रति सकारात्मक ?
डाबर नेपालका कारण स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल विवाद
कामना सेवाकोे ६८ औं शाखा जनकपुरमा
कोरोना भाइरसबीच नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले दुई विकास बैंक सहित दर्जनौ वित्तिय संस्थाको उठीबास गर्दै
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी
महालक्ष्मी विकास बैँक नयाँ शाखा विस्तार
कोशी अस्पतालमा प्रभु बैंक
बैंक अफ काठमाण्डू र भाटभटेनी मनी ट्रान्सफरबीच सम्झौता